साताको शुरुको दिन ३.०७ अंकले बढ्यो नेप्से, ८४ करोडको शेयर कारोबार, सर्किट लाग्ने कम्पनी कुन ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण साताको शुरुको दिन ३.०७ अंकले बढ्यो नेप्से, ८४ करोडको शेयर कारोबार, सर्किट लाग्ने कम्पनी कुन ?
वैशाख २९, काठमाडौं (अस) । साताको शुरुको दिन नेप्से परिसूचक अन्त्यमा ३ दशमलव शून्य ७ अंकले बढेर बन्द भएको छ । १ हजार २९१ दशमलव १६ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक दोस्रो घण्टाको अवधिसम्म घटबढमा रहेको थियो । दुई घण्टापछि आधा घण्टासम्म बढेर १ हजार २९४ दशमलव १७ विन्दुसम्म पुगेको थियो । सोपछि उतारचढावमा रहेको परिसूचक अन्तिम आधा घण्टामा बढेर १ हजार २९५ दशमलव शून्य ३ विन्दुमा बन्द भएको छ ।
कारोबार भएका दश समूहको परिसूचकमा होटल समूहको सबैभन्दा बढी ५ दशमलव शून्य १ प्रतिशत, दोस्रोमा उत्पादन तथा प्रशोधनको ४ दशमलव १५ प्रतिशत बढेपछि समग्र नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव २४ प्रतिशत बढ्न पुगेको हो । साथै, वित्त र निर्जीवन समूहको परिसूचक बढेपछि नेप्से बढ्न सघाउ पुगेको हो । बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ ।
होटल समहमा कारोबार हुने ओरियन्टल होटल र सोल्टी होटलको शेयर मूल्य बढेपछि सो समूहको परिसूचक बढ्न पुगेको हो । ओरियन्टल होटल लिमिटेडले सार्वजानिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक विवरणमा रू. २० करोड नाफा कमाएपछि कम्पनीको शेयर मूल्य रू. ५१ ले बढ्न पुगेको हो । दोस्रोमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा कारोबार हुने शिव्म सिमेण्ट र हिमालयन डिष्टिलरीको शेयर मूल्य बढेपछि सो समूहको परिसूचक बढ्न पुगेको हो ।
आइतवार रू. ८४ करोड ८१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम १० दशमलव ४७ प्रतिशत घटेको छ । सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ५१ अंकले बढेर २ सय ७७ दशमलव शून्य ३ विन्दुमा पुगेको छ । कारोबार भएका १७१ कम्पनीमा ७० कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ७४ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्न पुगेको छ । साथै, २७ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
कम्पनी संख्या कारोबार
सानिमा बैंकको संस्थापकतर्फको सर्वाधिक १६ करोडको कारोबार
बिहीवार र आइतवार सानिमा बैंकको संस्थापकतर्फको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर ५० नम्बरको ब्रोकरले खरीद गरेको छ भने ३३ कम्पनीको ब्रोकरबाट विक्री भएको नेप्सेमा देखिन्छ । कम्पनीको ९ लाख १३ हजार ८३५ कित्ता शेयरको रू. १६ करोड ४५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । आकर्षक बोनस प्रस्ताव गरेको सगरमाथा इन्स्योरेन्सको रू. ६ करोड ८२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ५८१ मा कारोबार भएको छ ।
शिवम् सिमेण्ट र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको शेयरमा बढेर सर्किट
आइतवार शिवम् सिमेण्ट र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर बढेर सर्किट लागेको छ । शिवम् सिमेण्टको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९८ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. ४५२ पुगेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ४१ ले बढेको छ । दोस्रोमा प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ८७ प्रतिशत बढेर रू. १ हजार २८० मा कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ११५ ले बढेको छ । कम्पनीले आकर्षक बोनस प्रस्ताव गर्ने हल्लाले कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको एक लगानीकर्ताले बताए ।